မစပ်စု| January 17, 2013 | Hits:5,137
9 | | အယူသည်းမှု တိုက်ဖျက်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့၌ တွေ့ရသည့် ဦးကျော်သူ (ဓာတ်ပုံ – ကျော်သူ/Facebook)
စောင့်ရတဲ့ မီးရယ် … ပန်းရဲ့လမ်းရယ်
မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ လက်ရောက်မှုနဲ့ ဆီးဂိမ်းအတွက် သီချင်းဖန်တီးသူ
မြန်မာဒါရိုက်တာ ရိုက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့ အရိုင်း အမှတ်ရ ပြပွဲ
Facebook စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွင် မြန်မာတဦးလည်း ပါဝင်
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 18, 2013 - 3:45 am	ဦးကျော်သူ ပြောတာ လုံးဝ မှန်လွန်းလို့ အလေးအနက် ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုနေတာပါ။ ဘုရားရှင် လက်ထက်ကတည်းက ပဋာစာရီ သားသေတော့ လူမသေဘူးတဲ့ အိမ်က နှမ်းဆီ ရှာခိုင်းခဲ့တာ လူမသေဘူးတဲ့ အိမ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သည်နေရာမှာ အိမ်လို့ တင်စားပြောပေမယ့် တကယ်က လူမသေဘူးတဲ့ မိသားစုဆိုတာ မရှိတာ ပြောတာပါ။ အိမ်ရှေ့က အသုဘ ဖြတ်လို့ လူသေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲ အသုဘယာဉ် ဖြတ်လို့ လူသေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုဘကို ကိုင်လို့၊ ထိလို့ ကံနိမ့်ကြေး၊ လူသေကြေးဆိုရင် ဦးကျော်သူတို့ ပါတီဝင်တွေ သူတို့တောင် အသက်ရှင်နေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ သုသာန်သင်းချိုင်းတွေကို ထိတ်လန့်စရာ ရိုက်ပြ၊ သရုပ်ချယ်ပြနေလို့ လူတွေ လန့်တာလဲ ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာ ဆိုရင် တချို့ သင်းချိုင်းမှာတောင် အုတ်ဂူနဘေး ပျော်ပွဲစား လာထွက်ကြပါတယ်။ သေဆုံးသူရဲ့ မွေးနေ့၊ နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေ သူ့နဘေး လာကျင်းပကြပါတယ်။ သင်းချိုင်းရှေ့က အိမ်တွေဆိုလဲ ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေနဲ့ ဈေးတူပါပဲ။ ၀ယ်သူမရှိ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ လူသားအားလုံး မွေးလာကတည်းက ဦးကျော်သူရဲ့ ‘မသာ ပါတီဝင်’ တွေ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ မသိကြဘူး။
Reply	Shwe Yoe January 18, 2013 - 6:51 am	Liberalization must follow liberty. U Kyaw Thu is trying to do what is best for all of us to be able to accept and receive one another as brothers and sisters. Extremism and narrow-mindedness must be avoided. Long live U Kyaw Thu. You have served us enough.
Reply	Nutkhaung January 20, 2013 - 3:12 pm	ကျနော်တို့ဆီမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုသော်ငြား တချို့ဟာတွေက ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ လွှမ်း မိုးမှုတွေ ရှိခဲ့တယ် တဲ့ ။ အမှန်ပါဘဲ တချို့ မဟုတ်ပါဘူး တော်တော်များများ လွှမ်းမိုးခံနေရ တာပါ ။ အသုဘ ဆိုတာ မတင့်တယ်တာ ။ သုဘ ဆိုတာ တင့်တယ် တယ် ။ သုဘရာဇာဆို တာ တင့်တယ်တဲ့ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ရာဇာ (မင်း) တဲ့ ။ အားပေးနေပါတယ် ကိုကျော်သူ။
Reply	mm February 15, 2013 - 11:20 pm	ကို ကျော် သူ ရဲ့ လုပ် ရပ် တွေ ကို လေးစား ပါ တယ် မပန်း မကြီး ဘူး ဆိုရင် ဆံ ပင် ညှပ် မုတ် ဆိပ် နှုပ် ခမ်း မွှေး တွေ ရိပ် လိုက် ပါ ပို ပြီး ကြက် သရေ ရှိ သွား တာ ပေါ့
Reply	ွှTun Oo April 21, 2013 - 3:19 pm	သေတဲ့လူနဲ့ မသေ သေးတဲ့လူကို နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး ကျနော်စဉ်းစားကြည့်နေတာတစ်ခုရှိတယ်။ အဖြေက – သေတဲ့လူက ရွံစရာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ဗျာ – စုတ်ပဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ တွေးခေါ် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မပြုနိုင်တော့လို့လေ။
ဆူညံသံတွေ ပိုများလာနေတဲ့ မြို့ပြမှာ
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧ၀ရက်တောင် မြန်မာ ၅ ဦး ပထမဆုံး အကြိမ် တက်မည်